Maana Faay by Maxamed Daahir Afrax. Waalidiinta Sooomaaliyeed in ay fahmaan waaqica ay ku nool yihiin, oo ay dhugmo sare u yeeshaan nolosha ubadkooda.
Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Qoraaga qisadan, Maxamed Daahir Afrax, waxa aan lee yahay: Xamar ayaa gees-ka-gees laga ga sheekaystaa quruxdeeda jidheedh iyo quruxdeeda dabeecadeed labada ba.
Rag aan qaarkood xigto ahayn qaarkood na isku xaafad ahayn ayaa igu la yaabbay, gabadha sida aan u kolkoolinayo, iyo sida aan mustaqbalkeeda uga fekerayo. Said Faqy added it Jun 04, Waxa uu ku gaadhay isaga oo adeegsanaya aqoonta falsafadda, hab gudbinta doodda iyo sarbeebta macnaysan. Learning Design, Dublin, Ireland: Tan iyo sannadkaa waxa aan ku jiray geyllan dheer oo aan ku baadigoobayay qisadaas.
Waalid jecel oo nafaqeeya ayaa ay haysatay. Waxa uu ka mid yahay gorfeeyayaasha suugaanta Soomaaliyeed. Waa na aragtiyo gar darrooyin iyo gaboodfallo badan ku dhisan oo sabab u ah halaagga dunida haysta maanta in badan oo ka mid ah.
Ugu dambayn, gabadhii waa ay is dishay; iyada oo mindi dhuunta iska gelisay! Miyaa aadan dareen iyo awood lahayn? Haddii ay Maana ahaan lahayd qof nolosha inta lagu soo koobay gaay baxsan oo wax badan fahamsan, garashadeeda na lagu tarbiyeeyayn lahaa faaqidaad iyo fikir; waa hubaal, in aan la dagi lahayn, oo Yur iyo Yac odhan lahayd. Kolka, ugu horrayn, bulshada wax wanaagsan loo qoro; dabadeed, ta xigta, akhriska la jeclaysiiyo lagu na dhiirri geliyo; jeerkaa na, ta sii xigta, suuqgayn heer sare ah loo sameeyo wixii la qoray, oo la xaqiijiyo in muwaaddin wal ba dhiganayaasha afkiisa ku qoran sida ugu fudud ku heli karo goorta uu doono; ayaa, ugu dambayn, la ogaan karaa bulshadaa in ay wax akhrido iyo in ay san wax ba akhriyin.
Hab bilowga iyo hab dhammaadka qisada waa sida ugu quruxsan ee sheeko faneed loo bilaabo loo na gunaanado.
Marka hore macsida in aan la barin. Rag badan oo Soomaaliyeed waxa ay rumaysan yihiin sinnadu ninka ragga sharaf in ay u tahay, naagta na sharaf darro! Create lists, bibliographies and reviews: Arrintaas si weyn ayaa ay uga fekeri jireen. Ma ay iman lahayn! Somali fiction — 20th century.
Fariinni Waa Qaan.: MAANA-FAAY. W/Q Maxamed Daahir Afrax
Silsiladda dhacdooyinka waa mid si aqoonaysan oo ka feker leh loo hindisay, isla markaa na mid wal baa ta kale ay dhaliso u tahay. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Moha marked it as to-read Sep 08, Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items.
fxay Maxaa waalidkeenna ka hor taagan carruurtooda in ay la saaxiibbaan, isa saameeyaan, oo tallaabo wal oo ay qaadayaan la taliyayaal wanaagsan u noqodaan? Sababahaa oo is biirbiirsaday oo lagu daray dhaqanka gaboobay ee ah gabadha kolka ay korto ina adeerkeed in lagu daro, lagu saddexeeyay awoodda jacaylka iyo qumbuliyadaha aasan ee loollanka wanaagga iyo xumuhu ka qarxaan, ayaa aayaheeda galaafanaya oo cadaabta dunida ku ridaya.
Mohmed Ahmed marked it as to-read Oct 31, Waa hubaal, kun Dhegey, kun Faadumo-yarey, kun Maaana-Faay, kun Kulmiye, kun Beyddan, kun Cawaale… in ay innagu jiraan, oo innaga buuxaan! Fardows marked it as to-read Jan 25, Fawy tumashada ayaa ay aad u ceebaynaysaa, aad na u colaadinaysaa.
Dhaqammada la caadaystay waxa ka mid ah mid xaq darro badan iyo xasarad badan ay ka muuqato. Aflagaaddayn hawshu keliya ma aha e, waxa hubaal ah, gabdhaha duulka fitneeya ee xumaanta inta ay u laqimaan hadhow na jidka leexsan kaga dhaqaaqa ragga in ay yihiin!